Ama-Nomac: Isibukeli Sezithombe Samahhala seWindows | Izindaba zamagajethi
Ama-Nomacs: Isibukeli Sesithombe Esihle Samahhala seWindows
Umbulali Uviniga | | Software, Windows
Uma ngabe ubuzama ukuthola uhlobo oluthile lwefayela le-uhlelo lokusebenza olusiza ukuthi ubuke izithombe ngezindlela ezahlukahlukene Ngakho-ke, ama-Nomac angaba yisixazululo esihle ngoba ithuluzi linezici ezithokozisayo esingazisebenzisa nganoma yisiphi isikhathi.
Enye yalezi zici ibalula Ama-nomac njengethuluzi lomthombo ovulekile, okusho ukuthi akunasikhathi lapho kuzodingeka ukuthi senze noma yiluphi ulwazi lokukhokha noma lokurekhoda ukuqhubeka nokusebenzisa uhlelo. Akuyona kuphela inzuzo esiyitholile kuleli thuluzi kepha kunalokho, inani elikhulu lemisebenzi ngandlela thile isisiza ukuthi sikhiphe ezinye izindlela ezinokusetshenziswa okufanayo.
1 Izici ze-Nomacs eziphezulu nemisebenzi
2 Izici ezithuthukile kumaNomac
Izici ze-Nomacs eziphezulu nemisebenzi
Njengoba besishilo ngaphambili ukuthi amaNomacs asinikeza ithuba lokubuka izithombe ngazo zonke izinhlobo, kulokhu kufanele sengeze i-RAW, ngokuvamile engahambisani namathuluzi amaningi alesi sitayela. Amanye amafomethi ambalwa asekelwa yiNomacs yi-jpeg, pnd, tif, gif, bmp, ico, psd, namanye amaningi. Lapha sizobe sesivele sithola inzuzo ethe xaxa, ngoba zimbalwa kakhulu izinhlelo zokusebenza ezinethuba lokubonisa izithombe ezisetshenziswe ku-Adobe Photoshop.
Ungasebenzisa imisebenzi eyisisekelo ekuqaleni uze uqale ukuzivumelanisa nabanye, kufaka phakathi nethuba lokukwazi ukwenza ifayela le- tshala, phendula usayizi, noma ujikeleze ngokuvundlile (noma mpo) esithombeni. Le misebenzi ingatholakala kunoma yiluphi uhlobo lwethuluzi, futhi akubona bodwa abakhona lapho, njengoba futhi inethuba lokusebenzisa "ukulungiswa okuzenzakalelayo", umsebenzi ozokuvumela ukuthi uphinde uthole imibala yesithombe, ukukhanya, ukugqama nezinye izinketho kunokuba mhlawumbe zehlulekile ngenkathi wenza ukuthwebula. Ngaphezu kwalokhu, ama-Nomacs futhi akunikeza ithuba lokumisa isithombe esetshenziswayo, njenge- "wallpaper" ku-Windows.
Izici ezithuthukile kumaNomac
Esinye isici esibalulekile ku- Ama-Nomac kunethuba lokukwazi ukufihla kokubili ibha yamathuluzi nohlaka lwefasitela lamathuluzi, ngenhloso yokukwazi ukwazisa isithombe sokwelapha ngendlela eyiyo. Ngaphezu kwalokho, uma singenisa izithombe ezingaphakathi kwefolda noma umkhombandlela, singa-oda ukuthi zethulwe njengamasilayidi, noma lokhu kungenziwa ngokwenza ngoba opharetha kuzofanela asebenzise inkinobho (noma izinkinobho zokuqondisa) ukuya phambili noma emuva ezithombeni.
Kusuka kuNomacs ungavula umsebenzi owengeziwe (obizwa ngeFayile Explorer) ozosisiza ngephaneli yawo, ukungenisa izithombe ngaphandle kokuvula i-Windows file Explorer ngokuzimela. Uma noma yiziphi izithombe esizingenisile kule interface zitholakala zinenkinga (ikakhulukazi ikhamera enezithombe), phakathi kwezici zayo ungakhetha futhi amasethingi e-flash, isikhathi sokuchayeka, ubude be-focal, i-ISO yayo, phakathi kwabanye. mingaki imisebenzi eyengeziwe. Ngazo besingathuthukisa ikhwalithi yezithombe, yize lezi zinhlobo zamapharamitha zivame ukusetshenziswa ngabathwebuli bezithombe abangochwepheshe nabadwebi bewebhu abangochwepheshe.
Kulezi zinsuku, abantu abaningi basebenzisa izithombe ukuzibeka njengokuqukethwe kumakhasi e-web ahlukile, imethadatha ivame ukufakwa kukho, into amaNomac angasisiza nayo njengomsebenzi owengeziwe. Ungasebenzisa leli thuluzi kuzo zonke izinhlobo zeWindows ngisho naku-8.1.
Kokubili imisebenzi eyisisekelo futhi ethuthukile ingasetshenziswa ngendlela enhle nganoma yiluphi uhlobo lwezithombe, noma ngabe ngesizathu esithile udinga okuthile okukhethekile (okungeyona i-Adobe Photoshop), sincoma ukuthi usebenzise ithuluzi I-Pixelmator (futhi kukhululekile), okungakusiza sebenza ngezendlalelo ezahlukahlukene kuphrojekthi efanayo, okuthile okufana kakhulu namathuluzi wokuqamba imidwebo yobungcweti akhona namuhla futhi okuthi ngesikhathi esithile, sibuye sikhulume ngebhulogi leVinagre Asesino.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ama-Nomacs: Isibukeli Sesithombe Esihle Samahhala seWindows
I-TalkHelper: gcina ngokuzenzakalela amakholi wethu wevidiyo we-Skype
Unenkinga nge-touch screen se-iPad mini? Sikunikeza izixazululo